Hordhac: West Ham United Vs Manchester United Oo Ku Kulmaya Premier League, Xidigaha Ka Maqan Kulankan, Shaxda Macquulka
HomeFalanqeynta KulamadaHordhac: West Ham United Vs Manchester United oo Ku Kulmaya Premier league, Xidigaha ka maqan Kulankan, Shaxda Macquulka
September 19, 2021 Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Kooxda West Ham United ayaa soo Dhaweeneysa Kooxda Manchester United Kulan ka Tirsan Horyaalka Premier league ee Todobaadkan, Red Devils ayaa Kulankan Ciyaareysa kadib guul-daradii kasoo gaartay Young Boys.
West Ham ayaa ku dheeshay koox ka awood badan sidii la filayay kulankii Europa League ee ay la ciyaareen Dinamo Zagreb habeenkii khamiista.
Kurt Zouma ayaa kulankiisii ​​ugu horeeyay West Ham la ciyaaray Dinamo Zagreb wuxuuna ku dadaalayaa inuu ku soo bilowdo kulanka Manchester United ee axada.
Craig Dawson iyo Angelo Ogbonna midkoodna lam soo bandhigin bartamihii isbuuca sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay seegaan Kulankan. Saddex daafac dambe ayaa ah dookh kale oo uu leeyahay Moyes.
Michail Antonio ayaa ganaax ku seegi doona West Ham axada. Jarrod Bowen ayaa la filayaa inuu ka ciyaaro dhexda.
Manchester United: Jadon Sancho wuxuu u muuqdaa mid gebi ahaanba waqtigan xaadirka ah ka maqan liiska Kooxda sidaa darteed waa la arkidoonaa haddii Ole Gunnar Solskjaer uu kulankan soo xusho.
Jesse Lingard ayaa si aad ah u doonaya inuu ka hor yimaado kooxdiisii ​​hore laakiin kalsooni ma heesto kadib qaladkii uu sameeyay bartamihii isbuuca.
Aaron Wan-Bissaka ayaa casaan la siiyay Talaadadii Champions League Diogo Dalot ayaana haatan dalbanaya cadaadis ah inuu booskiisa galo.
Scott McTominay ayaa ku soo laabtay tababarka isaga iyo Alex Telles Khamiistii. Fred iyo Nemanja Matic sidoo kale xulashooyinka ku jira.
Edinson Cavani ayaa la xaqiijiyay inuu maqnaan doono isbuucaan laakiin waxaa laga yaabaa inuu safto kulankiisii ​​ugu horeysay ee xilli ciyaareedka EFL Cup todobaadka soo socda.
West Ham United : Fabianski; Dawson, Zouma, Ogbonna; Coufal, Rice, Soucek, Cresswell; Fornals, Bowen, Benrahma
146 -kii kulan ee ay wada ciyaareen labada kooxood, Manchester United ayaa badisay 69 kulan marka loo eego West Ham United oo badisay 45 kulan.
Hammers ma laha rikoor wanaagsan oo dhawaanahan ay ka horyimaadeen Manchester United waxayna badisay kaliya hal kulan 19 -kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay Red Devils.
Manchester United waa guuldarro la’aan 28 -kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay marti ahaayeen – waa rikoor taariikhda Premier League ah.
Tan iyo markii uu ka tagay Old Trafford, David Moyes ayaa ku guuldareystay inuu ka adkaado Manchester United dhammaan toddobadii kulan ee uu la yeeshay kooxdiisii ​​hore.
Cristiano Ronaldo ayaa leh shan gool iyo hal caawin afar kulan oo Premier League ah oo uu ka horyimid West Ham United wuxuuna si gaar ah uga soo horjeeday Hammers waqtiyadii la soo dhaafay.